Kedu ka m si eme nnyocha maka isiokwu Amazon maka ụzọ ziri ezi?
N'oge a, Amazon aghọwo aha ụlọ nke ọchụchọ ngwaahịa na Intanet. Na onye obula nwere onwe ya iji gbalịa ịmepụta ngwaahịa n'ebe ahụ - ya na ihe dị ka nde mmadụ 80 na-azụ ahịa na-eme atụmatụ na ọ bụ naanị otu nsogbu ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-azụta ngwaahịa gị ga-ahụ nke ọma. N'iburu n'uche na nnukwu ụlọ ahịa a nwere ogo nke algorithm m na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ dịka otu ihe a na-achọ n'ịntanetị nke ndị ọkachamara mara nke ọma gburugburu ụwa ruo ihe karịrị afọ iri abụọ (dịka ọmụmaatụ, Google n'onwe ya Bing na ya na) - asp hosting mexico cheap web hosting. Ọ bụ ya mere m ji kwenye na isi ihe ga-eme ka onye ọ bụla na-ere ahịa na nke ọ bụla na-ere ahịa n'ebe a na-ahụ maka ngwaahịa Amazon. N'ezie, e nwere ihe dị mkpa ahịa ahịa dị mkpa ka ọ bụrụ ezigbo onye na-ere ahịa n'oge ahụ. Ịghara ịsị na ị gaghị egbusi oge gị na-agba ọsọ nchụso na-ebute ụzọ. Ka o sina dị, ejiri m n'aka na ọ bụ nchịkọta njirimara ngwaahịa bụ ihe mbụ ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị nweta mgbasa ozi dị mma maka ọchụchọ ntanetị. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-egosi gị nkenke iji mepụta nchọpụta isiokwu maka ngwaahịa Amazon - ma nọrọ na nchịkọta ọchụchọ mgbe niile.
Nkebi 1: Mkpụrụ Mkpụrụ obi
Malite na nchọpụta isiokwu dị mkpirikpi maka ngwaahịa Amazon na-etinye ihe ndị isi gị na Google search engine. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-ahụ n'ụzọ zuru ezu otú ndị mmadụ ga-esi chọọ ihe gị. Na-esote, lekwasị anya na mkpirisi okwu ogologo-tail na ahịrịokwu ụfọdụ dị nso na niche gị. N'otu oge ahụ, ọ ga-abụ mkpebi siri ike ịledo na ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-agba ọsọ ahịa ha maka ọtụtụ afọ. Nke a bụ mgbe ndị niile a na-emepụta ngwa ngwa ndị na-edebe ihe ntanetị na ebe nrụọrụ weebụ na-abanye.
Nkebi 2: Smart Ideas
Nzọụkwụ ọzọ ị na-ahọrọ ngwá ọrụ ịchọta isiokwu ziri ezi maka ngwaahịa Amazon. N'ụzọ dị nro, enwere ọtụtụ nhọrọ dịgasị iche iche, ihe ka ọtụtụ n'ime ha dị na ịnweta ohere. N'ezie, ụfọdụ n'ime ha na-akwụ ụgwọ-ohere naanị, ma a ka nwere ọtụtụ ndị ezigbo aka na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na-enweghị akwụ ụgwọ penny. A sị ka e kwuwe, ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla, ọ bụkwa gị ka ị ga-ahọrọ ngwá ọrụ ị ga-ahọrọ - n'eziokwu, ọtụtụ n'ime ha ka a na-emekarị maka ọchụchọ ọchụchọ iji nye gị ụfọdụ aro bara uru bara uru n'ikpeazụ.
Nkebi 3: Metrics Analysis
Na ebe a anyị na-emesị na-abịa na isi. Ihe bụ na mgbe ị na-agba ọsọ ọchụchọ maka ngwaahịa Amazon, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enwe ọtụtụ puku nkwenye isiokwu. Ya mere, ihe ịma aka kachasị mkpa bụ ikpebi ndị ga-abụ ndị ruru eru na ndị kwesiri ka a chọta gị n'ime ndị na-edekọ aha gị. N'ụzọ dị otú a, jide n'aka na ị ga-elebara anya nke ọma na ọnụọgụ abụọ ndị a:
Mpempe ọchụchọ - isi metric gosipụtara ole mmadụ site na mba jiri okwu gị na nyocha ajụjụ ọchụchọ .
Pịa - na-egosi atụmanya zuru ezu nke isiokwu ahụ iji nyefee okporo ụzọ na iji ya eme ihe mgbe ụfọdụ.
Ịgbagwoju anya - ma ọ bụghị, isi okwu dị na isi, na ị ga-achọpụta ịchọta mkparịta ụka nke kachasị dị mkpirikpi ga-ebugharị okporo ụzọ na ngwaahịa gị.